Ememe Obi Ụtọ Ka Seychelles Karịrị Ndị Nleta Ọbịbịa 2020
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ememe Obi Ụtọ Ka Seychelles Karịrị Ndị Nleta Ọbịbịa 2020
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Seychelles na -eme ememme ndị ọbịa
Ka ọ na -agbake kemgbe mkpebi siri ike nke ebe a ga -amalite mmalite ikpeazụ nke ịmalitegharị ya na Machị 2021, ahịa agwaetiti Indian Ocean bụkwa ihe ọzọ dị mkpa ka onye ọbịa 114,859th batara na Seychelles sun na Qatar Airways ụgbọ elu QR 678, nke rutere n'elekere 7:40 nke ụtụtụ na Mọnde, Ọktọba 11, karịa ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa edere maka afọ 2020.
Ejiri ndị na -agba egwu na egwu ọdịnala nabata ndị njem na ndị ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Seychelles.
Ngalaba njem na -abịa inye onyinye ekele dịka ihe ngosi nke ekele.
Onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya oriakụ Sherin Francis kwuru n'ọdụ ụgbọ elu na ihe ọ bụla dị mkpa na -akpọ oriri.
Ndị njem 233 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri QR 678 rutere n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Seychelles na Pointe Larue iji hụ ndị na -agba egwu obodo ka ha na -eme ụda egwu ọdịnala ka ebe a na -eme ememme ahụ bụkwa ihe ọzọ dị mkpa na njem nlegharị anya ya.
Ha natakwara ihe ngosi ekele Ngalaba njem nleta dị ka ihe ngosi nke ekele maka iji ọnụ ahịa obere agwaetiti ahụ akpọrọ ihe.
N'ọdụ ụgbọ elu ịnabata ndị ọbịa na iji gosi mmeri a, onye odeakwụkwọ ukwu nke njem nlegharị anya nke Seychelles, Oriakụ Sherin Francis kwuru, sị:
“N'inye afọ siri ike njem njem chere ihu; mmemme ọ bụla na -akpọ oriri. Taa, anyị ji ekele were akara akara nke a dị mkpa. Naanị izu abụọ gara aga anyị nabatara onye ọbịa anyị 100,000th maka afọ ahụ. Nọmba 118, 859 taa bụ ọnụọgụ dị mkpa ka ọ na -egosi na Seychelles ka bụ ebe ndị ọbịa kacha ahọrọ. Ọnụ ọgụgụ ahụ bụkwa a gbaa akaebe maka oke na nraranye nke ọrụ ọfịs anyị na -arụ gburugburu ụwa, ndị mmekọ ụlọ ọrụ anyị na ndị Seychelles niile na -enyere aka ịmalitegharị ogidi akụ na ụba anyị. Ọ bụ ụbọchị mpako maka ebe anyị na-aga, dịka anyị mere n'ime ọnwa iri naanị ihe anyị chere dị ka ihe kacha njọ na atụmatụ mgbake anyị. ”
Usoro mgbanwe dị iche iche na -esochi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya mgbe mmalite nke COVID ahụla ọnụ ọgụgụ mbata na -abata site na Seychelles ndị ahịa nri dị ugbu a gụnyere Russia, United Arab Emirates (UAE), Israel, Germany, France na Switzerland.
Ebe Seychelles nọ ugbu a na ndepụta njem akwadoro maka UK yana Italy, ịmaliteghachi ụgbọ elu nke Condor na nke Air France mechara n'ọnwa Ọktoba a, ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na ndị na-ele ọbịa na-atụ anya oge ka mma tupu ọkara oge ọkara na oge ezumike oyi dị ka nke ya. ahịa isi mmalite ndị ọbịa na Europe na -abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Na-ejikọ mgbake akụ na ụba ya na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi obodo, usoro ahụike ọha yana ọzụzụ siri ike COVID-nchekwa na asambodo nke azụmaahịa, ndị njem na ndị na-ahụ maka ile ọbịa, Seychelles bụ otu n'ime ebe izizi mepeghachi ndị ọbịa ya oke na Machị 2021. , atụmatụ nke na -akwụ ụgwọ nke ọma maka obodo onye njem nlegharị anya bụ ogidi akụ na ụba.